Iindaba-Amanqaku eendlela ezipheleleyo zerhasi
1. Malunga neentlobo zolwelo
Ukusetyenziswa kolwelo ukusebenzisa umoya ocinezelweyo, ukusetyenziswa kolunye ulwelo lomsitho kufuneka kuqinisekiswe yinkampani.
2. Ukujiya kwemeko yamanzi
Umoya oxineneyo ngamanzi acocekileyo iya kuba ngunobangela wokungasebenzi kakuhle kwezinto zomoya. Ngaphambi kokucoca ulwelo, izomisi zomoya, imigibe ye-condensate kufuneka ifakwe.
3. Ukuhambisa amanzi ngokuhambisa amanzi kaninzi
Nje ukuba i-condensate ilibele ukukhupha isihluzi somoya, i-condensate iya kuphuma macala omabini, ibangele ukungasebenzi kakuhle kwezinto zomoya. Ukulawulwa kokukhutshwa kwe-condensate kunezihlandlo ezinzima, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isihluzo ngomsele ozenzekelayo.
4. Malunga neentlobo zomoya
Umoya ocinezelweyo oqukethe imichiza, ioyile yokwenziwa enezinyibilikisi eziphilayo, ityuwa, iigesi ezonakalisayo, njl.njl.
5. Isihluzi somoya kufuneka sifakwe
Kufuphi kwicala elingasentla levalve, icebo lokucoca ulwelo kufuneka lifakelwe ukuchaneka kwemitha ezi-5 ngokulandela isihluzi somoya.
6. Emva kokumisela ukupholisa, isomisi somoya kunye nokuqokelela amanzi ngamanzi, njl.
Umoya oxineneyo oqukethe isixa esikhulu samanzi acocekileyo, uya kukhokelela kwivelufa kunye nezinye izinto zomoya zentshukumo embi, ke inkqubo yomthombo wegesi kufuneka icwangciswe emva kokubanda, isomisi somoya kunye nomqokeleli wamanzi ocoliweyo, njl.
7. I-Toner kunye nezinye izihlandlo kwicala elingaphezulu kwevalve, kufuneka zisete isahluli senkungu yeoyile
Xa i-toner eveliswa yi-compressor yomoya, eqhotyoshelwe kwivelufa, ivelufa iya kubangela isenzo esibi.
Iinkcukacha ezineenkcukacha kumgangatho womoya ocinezelweyo, jonga kwinkampani "inkqubo yokuhlanjululwa komoya" yenkampani.
8. Ukukhutshwa kwamanzi okuxineneyo
Amanzi acocekileyo kwisihluzi somoya kufuneka akhutshwe rhoqo.
Elastic ukutywina i-solenoid valve, yakuba ioyile, ioyile kufuneka iqhubeke.
I-Turbine No. 1 (akukho songezo) VG32 ISO kufuneka isetyenziswe. Ukongeza kwioyile yokuthambisa, iya kubangela ukungasebenzi kakuhle kwesivingco, njl.
10. Ukulahlwa kwemibhobho
Ukubetha ngaphambi kokuba uvuthe ngokupheleleyo okanye uhlambe umbhobho wokuphelisa umbhobho, ukusika ioyile okanye uthuli njl.
11. Indlela yokubamba uphawu lokutywina
Umbhobho kunye nokudityaniswa kombhobho sisihlandlo soqhagamshelo olusikiweyo, musa ukuvumela intambo yombhobho ocoliweyo kunye nokutywina ibhanti yenkunkuma exutywe nombhobho wangaphakathi. Xa kusetyenziswa itywina lokutywina, isiphelo esingaphambili somsonto wesikrufu kufuneka sibekelwe bucala ngemigca emi-1 yomsonto ukungasongeli itywina lokutywina.
12. Musa ukusebenzisa kwiigesi ezonakalisayo, iikhemikhali, amanzi, amanzi, umphunga wamanzi okanye indawo enezinto ezingentla.
13. Khusela ulwakhiwo oluhambelana ne-IP65 kunye ne-IP67 (esekwe kwiimveliso ze-IEC60529), (uthuli namanzi) eluthulini kwaye amanzi anokukhuselwa. Kodwa ayinakusetyenziswa emanzini, kufuneka ithathele ingqalelo.
14. Ngokuhambelana nemveliso ye-IP65 kunye ne-IP67, ufakelo kufanelekile ukuba luhlangabezane neenkcukacha zazo, kuyafuneka ukuba ufunde amanqaku emveliso nganye.
15. Irhasi enokutsha, umoya wegesi oqhumayo, sukusebenzisa, ukuthintela ukubakho komlilo kunye nokudubula. Le mveliso ayinasakhiwo sokuqhushumba.
16. Sukuyisebenzisa endaweni yentshukumo kunye nokothuka.
17. Indawo yokuchasana nelanga, kufuneka yongeze isiciko sokukhusela, sigubungele ilanga.
18. Kukho iindawo ezijikeleze umthombo wobushushu, imitha yobushushu kufuneka iyeke.
19. Apho kukho ioyile okanye iintlantsi zentsimbi kunye nezinye iindawo zokuncamathela, amanyathelo afanelekileyo okhuseleko kufuneka athathwe.
20. I-valve yesolenoid efakwe kwikhabhathi yolawulo, ixesha elide kumandla alo msitho, kufuneka ithathe amanyathelo obushushu ukuqinisekisa ukuba ivelufa yentsimbi ekuluhlu lobushushu ivumelekile.
Ulondolozo kunye nokuhlolwa kuya kwenziwa ngokungqinelana neenkqubo zesikhokelo.
Xa sele isetyenzisiwe, iya kubangela umonakalo, umonakalo okanye umonakalo kubasebenzi.
22. Izinto zokothula kunye nokucinezelwa komoya kumdaka
Kwisiqinisekiso ngokuqhuba into yenziwe ukuthintela ukuwa kokulahla kunye nokuthintela ukulahlwa kwabantu abalekileyo, ukunqunyulwa konikezelo lwegesi kunye nokunikezelwa kwamandla, inkqubo yomoya yeentsalela zangaphakathi zomoya oxineneyo ngokusebenzisa intsalela yokukhupha uxinzelelo ibikhupha, khupha izixhobo. Ukongeza, ezintathu embindini wetywina okanye uhlobo lokunqunyanyiswa kwesivalo, ivelufa kunye nesilinda phakathi komoya osele ucinezelweyo nayo iya kukhutshwa.
Emva kokubuyiselwa okanye ukufakelwa kwakhona kwezinto, eyokuqala yokuqinisekisa i-actuator yomoya njalo njalo kwenziwe ukuthintela ukulahlwa ngokukhawuleza kokulahlwa, kwaye emva koko kuqinisekiswe ukusebenza okuqhelekileyo kwezinto.
23. Ukusetyenziswa rhoqo
Ukuthintela intshukumo yevalufa imbi, ivelufa kufuneka ibekhona kwiintsuku ezingama-30 ukwenza utshintsho kwangoko, nceda unikele ingqalelo kumgangatho wonikezelo lomoya.
Ngokusebenza ngesandla, isixhobo kufuneka sixhunywe kwisenzo, kwaye uqinisekise ukusebenza okukhuselekileyo.